Ny Android Q beta dia ho tonga amin'ny ZTE Axon 10 Pro | Androidsis
Ny Android Q beta dia ho tonga amin'ny ZTE Axon 10 Pro
Aaron Rivas | | About us, ZTE
Tamin'ny tapaky ny volana lasa teo dia nampandre izany izahay ZTE's Axon 10 Pro 5G dia voamarina fa hamidy any Eropa, izay milatsaka tsara amin'ireo mpankafy miandry ny sainan'ny mpanamboatra sinoa any amin'ny faritra miaraka amin'ny fanohanan'ity tambajotra haingam-pandeha ity.
Izao no fotoana hamoahana ny iray hafa Vaovao tsara. Ho an'ireo izay maniry ny hizaha toetra ny beta an'ny Android Q ary mpampiasa ny ZTE Axon 10 Pro Ao amin'ny kinova fototra -tsy misy fampifanarahana 5G-, ho afaka hanao izany izy ireo tsy ho ela. Ny beta amin'ity kinova OS ity dia manangona mpangataka ho azy, ary izany dia nohamafisin'ny afisy ofisialy.
Tadidio izany ZTE dia mampihatra ny MiFavor ao amin'ny Axon 10 Pro any Shina. Ity dia rindrambaiko natokana ho an'ny Android na sosona fanaingoana izay tsy mampihatra afa-tsy ny sonia eo, na dia tsy mahasakana ny OS aza ilay kinova iraisam-pirenena, ka tsy "mahery setra" toy ilay voalaza, zavatra izay tian'ny ankamaroan'ny mpampiasa azy kokoa. Amin'ny ankapobeny, arakaraky ny maha "hafahafa sy tweak" kokoa ny interface iray dia mihakely ny itiavany azy.
Android Q beta dia ho tonga amin'ny ZTE Axon 10 Pro
Nolazainay ny zavatra MiFavor satria ny afisy nasehonay etsy ambony dia miantso azy io. Toa izany Ho hita ny Android Q beta, farafaharatsiny farafaharatsiny, ho an'i Chine ihany. Mety mila herinandro maromaro vao tonga any amin'ireo kinova manerantany amin'ny fitaovana.
Ny famoahana ilay afisy dia natao tamin'ny alàlan'ny kaonty Mifavor tao amin'ny Weibo. Voalaza ao fa Ny smartphone finday avo lenta dia antenaina havaozina amin'ny Android R amin'ny ho avy ihany koa., izay mety ho mpandimby ny Android Q. Ka misy antony tokony hahasambatra; ny finday dia ho mendrika andiany roa lehibe sy manan-danja amin'ny OS, izay hanome antsika be resaka mandritra ny fotoana maharitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Android Q beta dia ho tonga amin'ny ZTE Axon 10 Pro
Google mankalaza an'i Wimbledon miaraka amin'ny lalao miafina amin'ny valin'ny karoka
Raiso ny Xiaomi Mi Smartaband 4 latsaky ny 30 euro amin'ny Amazon